FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiChichewa IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHebhere IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLithuania IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiPangasina IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTurkish IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba
EHELSINKI—Emva kwemini ngoLwesihlanu, ngoAgasti 18, 2017, eFinland omnye udade wabulawa ngumntu ekuye kwafunyaniswa ukuba uhlasela amabhinqa. Lo mntu uphinde wabulala elinye ibhinqa waza wenzakalisa abantu abasibhozo ngoxa ebehlasela kwindawo ekuthengiswa kuyo eTurku, kwisixeko saseFinland esikunxweme olusemzantsi-ntshona. Emva nje kolo hlaselo, abameli abasuka kwiofisi yesebe eseFinland, umveleli wesiphaluka nabadala baye bathuthuzela abo baswelekelweyo.
UVeikko Leinonen, ummeli okwiofisi yesebe eseFinland uthe: “Isothuse kakhulu le nto yenzekileyo. Isixhele kakhulu eyokusweleka kwalo dade ebenguvulindlela ngoxa ebeshumayela ngetroli. Siyazi ukuba enoba silumke kangakanani na, asinakukwazi ukuphepha ‘isihlo esingenakubonwa kwangaphambili’ kuquka ukuhlaselwa. Kodwa siyaqhubeka sithuthuzelana, ngokukodwa intsapho yalo dade. Sithandazela ukuba uYehova ayenze ibe noxolo lwengqondo njengoko ilahlekelwe. Kwakhona siza kukuphepha ukuba nexhala kakhulu nto leyo enokusiphazamisa kumsebenzi wokushumayela.”—INtshumayeli 9:11; Roma 15:13; Filipi 4:6, 7.
Ukuze ithuthuzele abazalwana noodade, iofisi yesebe iye yathumela ileta kuwo onke amabandla aseFinland. Kwakhona iye yalungiselela intlanganiso ekhethekileyo ukuze ikhuthaze abazalwana noodade abayi-135 abashumayela ngetroli eTurku. Oovulindlela bazimisele ukushumayela ngetroli.
Ibaphazamisile kakhulu abantu abaninzi abahlala eTurku into yokuba kuhlaselwe iFinland, kuba kudla ngokuthiwa yenye yeendawo ezikhuselekileyo emhlabeni. Ngosuku olulandela olo hlaselo, abazalwana babebamamela abantu ibe babathuthuzela ngoxa babeshumayela kwindawo ekuthengiswa kuyo nakwindlu ngendlu.
Iofisi yesebe eseFinland ibulela kakhulu kubazalwana noodade abasehlabathini lonke abaye bathandaza baza bathumela nemiyalezo. (1 Petros 2:17; 5:9) Sibulela kakhulu uYehova, “uThixo onika unyamezelo nentuthuzelo.”—Roma 15:5.